Warka SAMSUNG: Daahfurka, Taleefoonada, Kiniiniyada iyo Waxbadan - Androidsis | Androidsis (Bogga 3)
Galaxy Z Flip wuxuu helayaa cusbooneysiinta amniga bisha Juun
Cusboonaysiinta amniga bisha Juun ee loogu talagalay 'Galaxy Z Flip' ayaa hadda loo heli karaa in laga soo dejiyo adduunka oo dhan.
Samsung Galaxy M01 hadda waa rasmi: fadeexad batteriga qiimaha burburka
Dhammaan faahfaahinta Samsung Galaxy M01, waa taleefan heer cusub ah oo soo gala oo la socda qaabab la hagaajiyay laakiin lala yaabo qaar ka mid ah.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Galaxy A50s, ayaa ugu dambeyntii kuu oggolaaneysa inaad duubto shaashadda qalabka asal ahaan adigoon isticmaalin barnaamijyada dhinac saddexaad.
Kani waa processor-ka Samsung Galaxy Note 20?
Si tartiib tartiib ah ayaan u baranaynaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xubnaha soo socda ee Qoraalka xusuusta ee soo saaraha Kuuriya. Haa,…
Snapdragon 865 rux: Samsung waxay bilaabeysaa wax soo saar balaaran oo ah Exynos 992 bisha Ogosto
Shirkadda Samsung ee Exynos 992 ayaa bilaabi doonta wax soo saar ballaaran bisha Ogosto, sida lagu sheegay warbixin cusub oo sir ah oo laga helay Koonfurta Kuuriya.
Samsung waxay bixin doontaa 80% shaashadaha iPhone 12
Samsung, mar kale, waxay mas'uul ka noqon doontaa soo saarista inta badan qalabka OLED ee noocyada cusub ee iPhone 12
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa qalabkeeda cusub ee la awoodi karo ee Exynos 880 oo leh 5G
Qalab qiimo jaban oo xiise leh oo loo yaqaan 'Exynos 880 chip' kaas oo loogu talagalay taleefannada casriga ee hooseeya oo horayba u lahaa mobiil lagu joogo 5G
In yar oo talaabooyin raaxo leh iyo fiidiyowga aan sameynay, waxaad awoodi doontaa inaad ku xirto Galaxy Note 10 iyo PC-gaaga Windows 10.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee loogu talagalay Galaxy S20 waxay ku dareysaa hagaajinta kamaradaha cusub
Taxanaha shirkadda Samsung ee Galaxy S20 ayaa hadda soo dhaweynaya cusbooneysiin cusub oo software ah oo ku kordhinaya waxyaabo kala duwan.
[VIDEO] Tani waa sida Loogu xidhayo Windows-ka Galaxy Note10 +: wicitaano, nuqul / dheji iyo inbadan
Xidhiidh weyn oo ka dhex dhaca Isku xidhka Windows iyo Galaxy Note 10 mahadnaqa cusboonaysiinta cusub ee Windows 10.
Tani waa sida ay u ekaan karto Galaxy Note 20
Iyada oo ku saleysan wararka xanta ah ee ku xeeran Galaxy Note 20, waxaan ku tusineynaa bixinta ugu horeysa ee na tuseysa sida casriga Samsung ee Stylus jir ahaan u noqon karo.
Samsung waxay soo bandhigeysaa Galaxy S20 Tactital Edition, oo ah nooc gaar ah oo loogu talagalay ciidanka Mareykanka
Daabacaadda cusub ee Galaxy S20 Tactical Edition waa ballanqaadka Samsung ee ah inuu daboolayo baahiyaha militariga dowladda Mareykanka
Samsung ayaa xukuntay suuqa 5G adduunka oo dhan
Samsung ayaa inta badan gacanta ku heysa suuqa 5G ee Mareykanka iyo adduunka oo dhan, in kasta oo saamiga suuqa ee Mareykanka uu yahay mid aflagaado ah.
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa dareemaheeda cusub ee kamaradda 50MP oo leh laba pixel autofocus
5MP waa shaashadda sawirka cusub ee ISOCELL GN1 taasna waxay noo horseedaysaa awoodo ballaaran oo taleefannada ah oo imaan doona dhammaadka sanadka.
DxOMark waxay sameysay falanqeyn ku saabsan maqalka iyo dhawaqa Galaxy S20 Plus, mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu waxqabadka sarreeya suuqa,
Samsung Galaxy A21s waa rasmi: 6,5 ″ guddi iyo Exynos 850
Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay Galaxy A21s, oo ah taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah kaas oo yimaadda si uu ula tartamo taleefannada kale.
Samsung Galaxy A Quantum Oo Lagu Dhawaaqay Quantum Encryption Technology
Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy A Quantum, oo ah telefoon leh quful encryption oo la heli doono qiyaastii toddobaad.
Samsung Galaxy M21 hadda waxaa laga heli karaa Spain
Samsung Galaxy M21, oo ah sharaddii ugu dambeysay ee Samsung ee khadka dhexe, ayaa hadda laga heli karaa Spain wax ka badan 200 euro.
Samsung Galaxy A21s waxay soo bandhigeysaa faahfaahin cusub kadib markay dhex martay Google Play Console
Google Play Console ayaa daaha ka qaaday dhowr astaamood oo farsamo oo ah Samsung Galaxy A21s cusub, aaladda oo imaan doonta toddobaadyo yar uun
Galaxy A20s wuxuu bilaabaa inuu helo Android 10
Terminalkii ugu dambeeyay ee Samsung ee bilaabay inuu helo Android 10, markan oo leh One UI 2.0, waa Galaxy A20s.
Galaxy A71 ayaa si wanaagsan uga dhex muuqda tijaabooyinka kamaraddiisa hore [Dib u eegis]
DxOMark waxay dib u eegis ku sameysay kamaradda hore ee Galaxy A71, oo ah mid kamid ah kuwa ugu caansan taleefannada casriga ah ee Samsung.
Hal UI 2.1 wuxuu bilaabaa inuu yimaado Galaxy A51
Cusboonaysiinta Lakabka Shakhsiyeed ee Samsung ee 'One UI 2.1' ee Galaxy A51 ayaa bilaabay in laga helo dalalka qaarkood
Samsung waxay ahayd shirkad labaad ee soosaara smartwatches intii lagu gudajiray rubuca koowaad ee 2020
In kasta oo ay hoos u dhigtay saamigeeda suuqa rubuca hore ee sannadka 2020, Samsung waxay sii wadaa inay kaalinta labaad ka gasho iibka adduunka.
Samsung waxay nagu tusinaysaa fiidiyow sida farsamada fiiqan ee Galaxy Z Flip u shaqeyso
Samsung waxay fiidiyoow ku tuseysaa sida nidaamka fiiq-furka ee ku jira Galaxy Z Flip uu u shaqeeyo, nidaam ka duwan kan laga helo Galaxy Fold
Galaxy Z Flip iibinta ayaa tilmaameysa inay suuq u diyaar garoobaan taleefannada casriga ah
Khamaarka labaad ee Samsung ee suuqa taleefannada gacanta ee isku laaban ayaa leh guushii ay Samsung saadaalisay markii la qorsheeyay.
Ugu dambeyntiina waxaa la xaqiijiyay in Galaxy Note 9 uu heli doono One UI 2.1
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in ugu dambeyntii Galaxy Note 9 sidoo kale heli doono One UI 2.1 oo leh dhammaan wararka laga heli karo Galaxy S20
Galaxy S8 wuxuu joojiyaa helitaanka cusboonaysiinta amniga bil kasta
Samsung ayaa ku dhawaaqday in labadaba Galax S8 iyo Galaxy S8 + ay heli doonaan cusbooneysiin amniga saddexdii biloodba mar ah, oo aan bil kasta loo helin sidii hore.
Cusboonaysiinta amniga ee Xusuusin 10 iyo Xusuusin 10 + hadda waa la heli karaa
Cusboonaysiinta amniga ee bisha May ee loogu talagalay Galaxy Note 10 iyo Note 10 + ayaa hadda la heli karaa.
Samsung Galaxy S Flip ma yahay taleefan leh kamarad wanaagsan? [Dib u eeg DxOMark]
DxOMark, dib u eegista kamaradda Galaxy Z Flip, waxay muujineysaa dhammaan awoodaha iyo daciifnimada terminal-kan waxqabadka sare leh.
Samsung waxay xaqiijineysaa Galaxy Note 20 iyo Galaxy Fold 2 qeybta labaad ee sanadkan
Samsung ayaa ku xaqiijisay qoraal ay soo saartay in Galaxy Fold 2 iyo Galaxy Note 20 ay imaan doonaan qeybta labaad ee sanadkan. Waxaan soo bandhigeynaa faahfaahin dheeri ah oo labadaba ah.
Samsung Galaxy J2 Core (2020): Taleefoon heer-gala oo cusub oo wata Android Go
Samsung ayaa ku dhawaaqday cusbooneysiinta Galaxy J2 Core, iyadoo ay adag tahay in wax isbeddel ah la sameeyo oo la doonayo in la gaaro suuqyada soo baxaya sanadkan.
Chietet-ka 'Exynos 992' ayaa noqon doona midka uu isticmaalo taxanaha 'Galaxy Note 20', isla markaana Samsung horeyba uga shaqeyneysay
Qalabka mobilada ee adeegsan doona taxanaha Samsung ee Galaxy Note 20 ayaa noqon doona Exynos 992, sida lagu sheegay xogo cusub.
Noocyada Galaxy Buds-ka ee ugu horreeya ayaa la cusbooneysiiyaa sifooyinka helitaanka Buds +
Dhawaaqa Dareenka ama awooda isku habboon ee Windows 10 PC-ga waa qaar ka mid ah waxyaabaha cusub ee cusbooneysiinta Buds.
Samsung Galaxy cusub ee Samsung oo ku dhow inuu suuqa galo
Samsung Galaxy cusub ee Samsung ayaa dhawaan shahaado ka heshay dowladda Shiinaha, sidaa darteed daah-furkiisa waa inaan dib loo dhigin muddo dheer.
Galaxy A20 wuxuu bilaabaa inuu helo Android 10 oo leh One UI 2.0
Waxay u muuqataa in aafada guud ee adduunka oo dhan ay dhibaataysan tahay, ay ahayd dhiirrigelin ay Samsung u baahnayd inay fuliso ...
Samsung Galaxy A21s, qeexitaanno buuxa ayaa xaday
Dad caan ah oo caan ah ayaa shaaca ka qaaday dhammaan faahfaahinta Samsung Galaxy A21s, taleefan la soo bandhigi doono "dhowaan".
TSMC waxay soosaaraysaa chipsets 2nm: waxay diyaar noqon karaan sanadka 2025
TSMC, mid ka mid ah soo saarayaasha Chipset-ka ugu weyn, ayaa hada ka shaqeyneysa xalka 2nm, kaas oo diyaar noqon lahaa sanadka 2025.
Sidan ayaa ah taleefoonkii gacanta ee ugu horreeyay ee leh kaamirad soo-baxda Samsung ay umuuqato
Muuqaal cusub oo fiidiyoow ah ayaa soo baxay oo si buuxda u faahfaahinaya taleefankii ugu horreeyay ee Samsung oo leh kamarad hore oo laga noqon karo.
Cayaaraha Olombikada ee Samsung Galaxy S20 Plus waa la joojiyay
Samsung Galaxy S20 Plus oo ka socday Olombikada ayaa si rasmi ah loo joojiyay. Tan hadda si rasmi ah ayaa loogu dhawaaqay.
Samsung waxay lacag la’aan ku hagaajisaa taleefannadeeda dhammaan shaqaalaha safka hore ee ka dhanka ah COVID-19 ee Mareykanka
Xitaa wuxuu daboolayaa kharashka maraakiibta si shaqaalaha safafka hore ee coronavirus "dagaalka" ay u dayactiraan Samsung-kooda.
Kaamirada Galaxy S20 Ultra waxaa lagu tijaabinayaa dib u eegista cusub ee DxOMark
DxOMark wuxuu ku tijaabiyay kaamirada Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung wuxuuna soo gunaanaday inay ka mid tahay kuwa maanta ugu fiican.
Cusboonaysiinta hagaajisa shaashadda cagaaran ee Galaxy S20 Ultra hadda waa la heli karaa
Dhibaatada shaashadda cagaaran ee qaar ka mid ah Galaxy S20 Ultra ay soo bandhigtay ka dib cusbooneysiintii ugu dambeysay, horeyba waxay u leedahay xal la cusbooneysiintii ugu dambeysay
Samsung waxay soo saartay taleefan casri ah oo cusub oo caddeyn u ah wax walba, waxaana loo yaqaan Galaxy XCover Pro
Samsung Galaxy XCover Pro ayaa ugu dambeyn suuq cusub gashay. Taleefanka rooga ah ayaa durba si rasmi ah uga bilaabmay Maraykanka.
Galaxy Fold 2 wuxuu sidoo kale lahaan lahaa S Pen iyo 512GB oo ah keyd gudaha ah
Iyada oo leh shaashad 120Hz ah iyo 512GB kaydinta gudaha ah, sidan ayaad ku arki kartaa Samsung's Galaxy Fold 2 cusub.
Fold Galaxy 2 wuxuu ku bilaaban lahaa shaashad dhan 120 Hz
Samsung oo ah taleefanka gacanta ee isku laabma ee soo socda, kaas oo suuqa u gali doona sida Galaxy Fold 2, ayaa ciyaari doona bandhig 120Hz ah.
Galaxy A51 5G iyo Galaxy A71 5G ayaa la cusbooneysiiyay si ay u noqdaan kuwo ku habboon Google ARCore
Telefoonada casriga ah ee ugu dambeeyay ee si rasmi ah ula jaan qaadi kara Google ARCore waa Galaxy A51S 5G cusub iyo Galax A71S 5G
[VIDEO] Wararkii ugu fiicnaa ee One UI 2.1 ee Galaxy Note 10 + (iyo Galaxy kale)
Muuqaal ahaan waxaan kuusoo bandhigeynaa Qabashada Kali ah, 60FPS duubista kamarada hore ama Share Share on the Galaxy Note 10 with One UI 2.1
Samsung waxay sii deyneysaa hal UI 2.1 Cusbooneysiin ah oo loogu talagalay Galaxy Note 10 Lite oo leh Qalabka Amniga Bishan
Samsung ayaa soo saareysa cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay Galaxy Note 10 Lite. Tani waxay ku dareysaa nooc ka mid ah One UI 2.1 lakabka, iyo waxyaabo kale.
Galaxy A30s wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 10
Samsung kama tagayo hawsha ah inay Android 10 siiso qaar badan oo ka mid ah taleefannadeeda gacanta. Tani waa sababta Galaxy A30s ay hadda u hesho OTA.
Miyay shaashaddaada Samsung Galaxy S20 Ultra u muuqataa mid cagaar ah? Adiga kaligaa ma tihid
Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid shaashadda Samsung Galaxy S20 Ultra oo cagaar noqonaysa, waxaan kuu sheegaynaa sababta ay u dhacdo iyo sida loo hagaajiyo.
Waxaan dhowaan heli doonnaa qiimeynta DxOMark ee kamaradda Galaxy S20 Ultra
Maalmo yar gudahood waxaan wax ka baran doonnaa dib u eegista qotoda dheer ee DxOMark ee Samsung Galaxy S20 Ultra.
Windows 10 wuxuu hada ka shaqeynayaa Samsung Galaxy S8 iyo Android kale
Sababtoo ah xalka xasuusta Windows 10 ee la socota Snapdragon 835, hadda waxaa lagu dhejin karaa Galaxy S8 iyo kuwa kale.
Samsung Galaxy oo leh Android 10 hadda wixii ka dambeeya lama jaan qaadi karo Google Daydream
Samsung way joojisay inay bixiso taageerada Google Daydream muraayadaha dhabta ah, oo ay ugu wacan tahay tirada dadka isticmaala oo kooban.
Galaxy Fold 2 ayaa la imaan doona laba midab oo cusub oo aan lahayn S-Pen
Jiilka labaad ee Galaxy Fold, ayaa la imaan doona midabbada asalka ah ee ay ahayd inuu la yimaado jiilkii ugu horreeyay wuxuuna sameyn doonaa iyada oo aan lagu xaman S-Pen
Maxaan ka filan karnaa Galaxy Tab S6 Lite?
Mar labaad waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah kaniiniyada xilligan la filayo, taas oo aan ka ahayn Samsung Galaxy Tab S6.
Samsung Cloud waxay joojineysaa iskuxirka xogta kumbuyuutarka
Koodhadhka dhinac saddexaad ee aan ku hayno qolka Play Store, kaliya noo oggolaan maayo inaan wax ka qoro mid kale ...
DxOMark wuxuu dhigayaa kamaradda Galaxy A71 imtixaanka: sidee u wanaagsan yahay? [Dib u eegis]
DxOMark waxay qaadatay Samsung's Galaxy A71 si ay u faahfaahiso awooda kamaradaha afar geesoodka 64MP waxayna qiimeysaa waxqabadkeeda.
Samsung ayaa soo jiitay cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Galaxy M31
Shirkadda Kuuriya ayaa lagu qasbay inay ka laabato cusbooneysiintii ugu dambeysay ee amniga ee laga sii daayay Hindiya ee loogu talagalay Galaxy M31.
Qiimaha Yurub loogu talagalay Galaxy Tab S6 Lite, Samsung oo ah nooca dhexe ee dhexe ee casriga ah, ayaa goor dhow la shaaciyay.
Samsung's Galaxy A50 wuxuu bilaabaa helitaanka Android 10
Samsung Galaxy A50 ayaa bilaabay inuu helo casriyeyntii inbadan la sugayay ee ku socotay Android 10, oo ah cusbooneysiin loo qorsheeyay bisha Abriil sida ku cad khariidada wadada ee Samsung.
Samsung waxay si rasmi ah u soo bandhigaysaa Galaxy A71 5G, Galaxy A51 5G iyo Galaxy A21
Samsung ayaa ku dhawaaqday saddex qalab oo cusub, laba ka mid ah waa 5G iyo taleefan aasaasi ah oo ay ku jiraan illaa afar dareemayaal.
Galaxy S21 wuxuu noqon lahaa mobiilkii ugu horeeyey ee leh kamarad isku dhafan shaashadda hoosteeda
Galaxy S21 wuxuu la imaan lahaa kamarad aan la arki karin oo shaashad ah, muuqaal ah oo loo tixgelinayo inuu yahay isbeddel mustaqbalka ah.
Samsung Galaxy J6 wuxuu bilaabaa inuu helo cusboonaysiinta Android 10
Samsung Galaxy J6 ayaa si lama filaan ah u helaya tan ugu muhiimsan ee cusbooneysiinta, si tartiib tartiib ah ayey u gaari doontaa taleefannada.
Cusboonaysiinta amniga bisha Maarso ee loogu talagalay Galaxy Note 9 waxay dhibaato ku haysaa shaashadda
Cusboonaysiinta amniga ee ugu dambaysay ee Maarso 2020 ee loogu talagalay Galaxy Note 9 waxay keenaysaa dhibaatooyin hawlgalka shaashadda boosteejooyinkan.
Isku laabma Galaxy Fold 2 wuxuu yeelan doonaa nooc dhaqaale oo ah 256 GB
Sida laga soo xigtay xogta cusub ee xaday, Samsung Galaxy Fold 2 ayaa soo bandhigi kara nooc 256GB ah oo raqiis ah oo ah kaydinta gudaha.
Beta-ka cusub ee Internetka Samsung, wuxuu ku darayaa horumarin si looga hortago la socoshada
Beta-ka cusub ee Internetka Samsung, beta cusub ayaa hada la heli karaa oo ay ku jiraan horumarin lagu sameynayo raadraaca iyo waliba in lagu daro badhamada cusub ee hagista
Ma jiri doonaan cusbooneysiin dheeraad ah Samsung Galaxy S7
Maalmo ka hor waxaan kuu sheegnay in Samsung Galaxy S7 ay heshay casriyeyn xagga amniga ah. Iyo runta ...
Samsung Galaxy A21 ayaa lagu muujiyay qaabab laga soo qaaday dhinacyo kala duwan
Bandhigyadii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy A21, oo ah taleefan heer-sare ah oo aan horay u ogaanay faahfaahinta qaar, ayaa lagu muujiyay iyada oo loo marayo gif.
Kuwani waa Samsung Galaxy Buds cusub oo u qaab eg «Yuhuud»
Waxay la midoobi doonaan makarafoonno dheeri ah si loo wanaajiyo waayo-aragnimada wicitaanka iyo Samsung Galaxy Buds-kan cusub ayaa la filayaa inay lahaadaan baajin buuq.
Samsung Galaxy A21s waxay mareysaa Geekbench oo muujineysa processor-keeda
Samsung Galaxy A21s waxay soo martay barnaamijka Geekbench oo muujinaya processor ilaa hada aan la garanayn iyo qaybo kale.
Cusbooneysiinta One UI 2.1 wuxuu bilaabmayaa inuu ku yimaado Galaxy S10 iyo Xusuusin 10
Samsung's One UI 2.1 wuxuu bilaabmayaa inuu ku faafo dhamaan taleefannada casriga ah ee Galaxy S10 iyo Galaxy Note 10.
Samsung waxay leedahay Exynos 990 wuxuu u awood badan yahay sida Snapdragon 865
Samsung waxay difaacdaa iligga waxayna musbaar ka dhigtaa Exynos 990, oo ah mashiinka waxqabadka sare ee moobiilka ee aan ku aragno taxanaha taxanaha Galaxy S20 ee la bilaabay Febraayo.
Galaxy Tab S6 wuxuu bilaabaa helitaanka Android 10 oo leh One UI 2.1
Android 10 oo leh hal UI 2.1 interface, wuxuu bilaabay inuu ku yimaado kiniinka Samsung Galaxy Tab S6.
Cusbooneysiin cusub oo kamarad ah ayaa loo sii daayay Galaxy S20
Cusbooneysi cusub oo kamarad caalami ah ayaa u yimid Samsung Galaxy S20. Waxa kale oo ay ku dareysaa niyadsamooyin kala duwan iyo waxyaabo kale oo badan.
Galaxy Note 20 + wuxuu isticmaali doonaa qalabka Snapdragon 865
In kasta oo weli waqti jiro, haddana waxa soo ifbaxaya iyo xanta ku saabsan Galaxy Note 20. Markan waa Snapdragon 865 chip.
Sida Loo Sahlo Heerka Muujinta Aan Rasmiga Ahayn ee 96Hz ee Galaxy S20
Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo kartiyeeyo inta jeer ee shaashadda 96 Hz ee Galaxy S20 loo maro barnaamijka ay soo saartay XDA-Developers.
Galaxy Note 8 wuxuu helayaa baarka amniga Abriil 2020
Samsung ayaa hadda soo saartay shaashadda amniga bisha Abriil 2020 ee Galaxy Note 8
Galaxy A10s wuxuu bilaabaa inuu helo cusbooneysiinta Android 10
Haddii aad tahay isticmaaleyaasha Galaxy A10s ee Malaysia, waxay bilaabeen inay helaan cusbooneysiinta Android 10, oo ah cusbooneysiin aan waqti dheer ku qaadan doonin inuu gaaro Yurub
Waxay galayaan sanadkii shanaad taasna waxay kaliya ku lug leedahay cusbooneysiinta amniga ugu dambeysa ee loogu talagalay Galaxy S7 iyo S8 gees.
Taxanaha 'Galaxy S20' wuxuu soo dhaweynayaa balastarrada cusub ee amniga Abriil iyada oo ay ugu wacan tahay cusbooneysiin cusub
Galaxy S20s waxay helayaan cusbooneysi cusub oo software ah oo ay ku jiraan heerka balastarka amniga ee Abriil 2020.
Samsung waxay ka caawisaa dowladda Kuuriyada Koofureed soo dhoofinta waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si loo sameeyo waji-waji
Shirkadda caalamiga ah ee Samsung ayaa sameysay qabanqaabada lagama maarmaanka u ah in dowladda Kuuriya ay hesho agabyada lagama maarmaanka u ah soo saarista waji-duubyada
Android 10 wuxuu bilaabmayaa inuu yimaado Galaxy A9 (2018)
Samsung Galaxy A9 (2018) wuxuu bilaabay inuu helo Android 10, taas oo ah cusbooneysiintii labaad ee ugu dambeysay ee ugu dambeysay ee terminal-kan la helo.
Samsung Galaxy M11 hadda waa rasmi: ogow astaamaha iyo helitaankiisa
Samsung Galaxy M11 waa taleefan casri ah oo cusub oo lagu soo bandhigay muuqaal daloolin ah iyo 5,000 mAh batari.
Samsung Galaxy M01 waxaa shahaado siiyay Wi-Fi Alliance
Telefoon cusub oo Samsung ah ayaa soo dhex maray Wi-Fi Alliance, wuxuu noqon lahaa Galaxy M01, oo ah aalad loogu talagalay jihada hoose.
Samsung Galaxy M11: qeexitaanadiisa oo dhan waa la sifeeyaa oo ay la socdaan kuwa bixiya
Samsung's Galaxy M11 ayaa ah taleefanka soo socda ee soo saaraha Koonfurta Kuuriya. Qeexitaankiisa iyo qeexitaankiisa ayaa la helay.
Tilmaamaha barnaamijyada 'Galaxy S20' waxay u yimaadaan Galaxy S10 / Note 10 ee One UI 2.1
Hawlaha cusub ee lagula wadaagayo feylasha dadka ku dhow iyo 60FPS ayaa loo hawlgeliyaa FHD iyo QHD ee kamaradda loogu talagalay Xusuusin 10 iyo Galaxy S10.
Sidee looga faa iideystaa qaabka Flex ee Galaxy Z Flip
Samsung waxay ina tusaysaa sida aan uga faa iidaysan karno qaabka Flex ee u kala qaybiya isku xidhka isticmaalaha codsi laba.
Fold Galaxy wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 10
In kastoo gadaal wixii laga filan karo qiimaha terminalkan, cusboonaysiinta Android 10 ee loogu talagalay Galaxy Fold ayaa hadda la heli karaa.
New Galaxy Tab A 8.4 (2020): Maxay tahay inay bixiso?
Samsung ayaa suuqyada Mareykanka ka hirgelisay Galaxy Tab A 8.4 (2020). Tan waxaa loo soo bandhigey inay tahay terminal faa'iidooyinka celceliska ah.
Samsung ayaa ka dhigaysa Galaxy A31 rasmi ah: 6,4 ″ panel iyo 5.000 mAh baytariga
Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay Galaxy A31 cusub, oo ah terminaal dhexdhexaad ah oo dhexda ugu jira taleefannada sida Galaxy A11 iyo A41.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee hagaajisa kaameradda Galaxy S20 waxay noqotaa mid caalami ah
Telefoonada casriga ah ee Samsung ee Galaxy S20 ee casriga ah ayaa hadda helaya casriyeyntii ugu dambeysay ee kamaradaha adduunka oo dhan.
Chipsets-ka 'Exynos' ee loo yaqaan 'Samsung' waxay ka barakiciyaan Apple-ka xagga saamiga suuqa
Apple hadda waxay kujirtaa kaalinta afaraad shaxda bixiyeyaasha SoC ee adduunka ugu weyn iyadoo ay ugu wacan tahay baahida loo qabo Exynos chipsets.
Sida loo waafajiyo qoraalada lagu sameeyay S Pen waqtiga dhabta ah ee u dhexeeya Galaxy Note10 + iyo PC
Samsung Notes ma siiso isla waayo-aragnimada waqtiga-dhabta ah ee OneNote markay qoraal ka soo qaadanayso Galaxy Note10 + waxayna u muuqataa waqtiga dhabta ah.
Samsung Galaxy A71 5G qeexitaannadu waxay ku qoran yihiin TENAA
Barmaamijka tijaabada ee TENAA ayaa ku soo raray Samsung Galaxy A71 5G keydkiisa xog dhowr ah astaamaheeda iyo qeexitaankiisa.
Samsung waxay soo saareysaa taxane kooban oo ah Iron Man oo ka tirsan Galaxy S20
Samsung, si ay uga dhigto Galaxy S20 mid caan ah oo ka farxisa macaamiisha, waxay hadda soo bandhigtay taxanaha Iron Man Edition ee qoyskan Shiinaha.
Samsung Galaxy A41 waa rasmi: kamarad Triple iyo Helio P65
Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee Galaxy A41, oo ah qalab markii hore soo gaadhay Japan.
Waxay bilaabeen codsi doonaya inay ka hor istaagaan Samsung inay sii wadato isticmaalka Chipsets-keeda 'Exynos'
Codsi laga bilaabay Change.org ayaa doonaya inuu ku qanciyo Samsung inuu joojiyo isticmaalka processor-ka Exynos oo had iyo jeer doorto Qualcomm's Snapdragon.
Samsung waxay xirtaa dukaamada kuyaala Mareykanka iyo Canada coronavirus darteed
Samsung ayaa ku dhawaaqday in si looga fogaado ku faafin coronavirus-keeda dukaamadeeda, ay ku dhaqaaqday inay ka xirto labada wadan ee Canada iyo Mareykanka.
Samsung Galaxy M21 waa rasmi: batari 6.000 mAh iyo Android 10
Samsung ayaa si rasmi ah u shaacisay Galaxy M21 cusub oo ah aalad dhexdhexaad ah oo ku faanta batteriga weyn.
Samsung waxay bilaabeysaa soosaarid ballaaran ee keydinta eUFS 3.1
Waxay ku dhawaaqeysaa wax soosaarka ballaaran ee xusuusta keydinta eUFS 3.1 iyo inay awood u leedahay inay saddex laabto xawaaraha qorista marka loo eego 3.0.
Ma rabtaa inaad ka daawato Netflix Samsung-kaaga? Kuwani waa moodooyinka HDR10 ee is waafajinaya
Ma waxaad raadineysaa taleefan Samsung ah oo aad ugu raaxeysato Netflix tayada ugu sareysa? Kuwani waa moodooyinka ugufiican ee laga fiirsado.
Samsung Galaxy A11 waa rasmi: 6,4 ″ iyo kamarad gadaal seddex geesle ah
Samsung ayaa ka dhigtay Galaxy A11 rasmi boggeeda rasmiga ah ee saxaafadda, kaas oo ay ku siineyso faahfaahin farsamo ee casriga ah.
Samsung waxay soo bandhigtay casriyeyn cusub oo caalami ah taxanaheeda Galaxy S20
Samsung waxay soo saareysaa cusbooneysiin cusub oo software ah oo loogu talagalay Galaxy S20, S20 Pro, iyo S20 Ultra adduunka.
Casriga casriga ugu fiican maalinta aabaha
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa 5 xiiso badan oo xiiso leh oo ku saabsan taleefannada casriga ah ee ugu raqiisan ee aad iska bixin karto maalinta Aabbaha
Samsung's One UI 2.1 ayaa imanaya Galaxy S9, S10, Note 9 iyo Note 10
Samsung Galaxy S20 iyo Flip's lakabka u habeynta, One UI 2.1, ayaa sidoo kale laga heli doonaa qaybta Note iyo S.
Cusboonaysiinta Android 10 waxay u timaadaa Samsung Galaxy M40
Cusbooneysiinta softiweerka ah ee ay Android 10 ku dareyso ayaa bilaabeysa inay u rarto Samsung's Galaxy M40, sida ay sheegayaan warbixino kala duwan.
Samsung Galaxy A31 waxay heshay shahaadada Bluetooth
Samsung's Galaxy A31 ayaa dhowaan maray shahaadada Bluetooth, sidaa darteed taleefanka ayaa la heli doonaa goor dhow.
Samsung Galaxy A41 ayaa laga helay Helio P65 iyo 4 GB oo RAM ah Geekbench
Samsung waxay ka diiwaan galisay Galaxy A41 miisaanka Geekbench oo ay la socoto Mediatek's Helio P65 iyo 4GB RAM.
Samsung Galaxy A51 5G wuxuu isku sawiray Geekbench iyo Exynos 980
Geekbench wuxuu ku taxay nooca 5G ee caanka ah Samsung Galaxy A51 barnaamijkiisa tijaabada ah. Qalabka Exynos 980 waa waxa taleefanka ku shaqeeya.
Samsung Galaxy Z Flip wuxuu daadanayaa isagoo xaqiijinaya naqshadeeda
Si tartiib tartiib ah ayaan u ogaaneynaa faahfaahinta cusub ee Samsung Galaxy Z Flip, taleefanka soo laabanaya ee xiga ee soo saaraha Kuuriya ee imanaya ...
Samsung waxay iibisay ku dhowaad 2019 milyan oo taleefannada casriga ah sanadkii 300
In ka badan 1400 bilyan oo taleefannada casriga ah ee la iibiyay 2019, 300 milyan ayaa u dhigma Samsung oo keliya, waxaana ku xiga Huawei iyo Apple.
Naqshadaynta Samsung Galaxy A81 waxaa shaaca ka qaaday kiiskeeda difaaca
Samsung Galaxy A81 waa mid ka mid ah kuwa dhexe ee soo socda ee Kuuriyada Koofureed. Kahor intaan la sii deyn, kiiskiisa difaaca ayaa la shaaciyay.
Kaamirada taleefanka ee Galaxy S20 iyo S20 + waxay noqon doontaa 64 mpx si loogu duubo fiidiyowyada 8K
In kasta oo dareemaha ugu weyn ee Galaxy S20 iyo S20 + uu yahay 12 mpx, waxay ku mari doontaa muraayada telephoto oo aan awoodi doono inaan ku duubno fiidiyowyo 8k.
Faahfaahinta rasmiga ah iyo sawirrada Galaxy Z Flip waa la sifeeyey
Marka ay in ka badan toddobaad ka hadhsan tahay ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin Galaxy S20 iyo Galaxy Z Flip, way dhammaadeen ...
Android 10 hadda waa loo heli karaa Galaxy S9 ee Jarmalka
Cusboonaysiinta muddada dheer la sugayay ee ku saabsan Android 10 ee Galaxy S9 iyo S9 + ayaa bilaabay in laga helo Jarmalka iyo Mareykanka iyada oo loo marayo hawl wade.
Samsung waxay cusbooneysiineysaa khariidadda Android 10 ee boosteejooyinkeeda
Samsung waxay cusbooneysiisay khariidadda bilowga ah ee Android 10 ee loogu talagalay dhammaan moodooyinka loo doortay in la cusbooneysiiyo.
Android 10 ee Galaxy S9 iyo S9 + ayaa imaan doona bisha Febraayo sida ay sheegtay Samsung
Nooca ugu dambeeya ee Android 10 ee loogu talagalay Galaxy S9 iyo Galaxy S9 + wuxuu imaan doonaa qaabkiisii ​​ugu dambeeyay bisha Febraayo, sida ay sheegtay shirkadda cusbooneysiinta khariidadda tas-hiilaadkeeda.
Samsung waxay siin doontaa Galaxy Buds-ka cusub midka ugu horeeya ee keydinaya S20 + iyo S20 Ultra
Ka mid noqoshada kuwii ugu horreeyay ee keydiya Galaxy S20 + iyo S20 Ultra waxaa lagu abaalmarin doonaa jiilka labaad ee Galaxy Buds, maadaama lagu soo dari doono bilaash.
Ma haysaa Samsung Galaxy S8? Waxaan kuu haynaa war fiican
Haddii aad leedahay Samsung Galaxy S8 waxaan kuu haynaa war wanaagsan: taleefanka ayaa heli doona Android 10 si ka dhakhso badan intii aad filaysay.
Sawirro rasmi ah ayaa na tusaya Samsung Galaxy S20 iyo Galaxy Buds +
Boosto xayeysiin ah ayaa la soo daadiyay iyadoo xaqiijineysa nashqadda Samsung Galaxy S20, marka lagu daro qalabka cusub ee loo yaqaan 'Galaxy Buds +'.
Galaxy M21 wuxuu marayaa Geekbench oo muujinaya faahfaahin cusub
Samsung Galaxy M21 wuxuu soo maray Geekbench isagoo ka tagay tafaasiil cusub, oo ay ku jiraan processor-ka, RAM iyo nidaamka hawlgalka.
Samsung Galaxy A41 wuxuu yeelan doonaa batari 3.500 mAh ah
Samsung Galaxy A41 ayaa talaabo talaabo ah u maraya shahaadooyinka kala duwan ka hor intaan la bilaabin bilaha soo socda.
Mineblast !! Waa goob aad u qarxan oo aad ku raaxeysan karto firfircoonida
Madal ay ku yaalliin farshaxanno badan oo pixel ah oo loo yaqaan 'Mineblast' oo si fiican ula shaqeysa qaraxyadaas iyo kuwa badan oo firfircoon.
Samsung Galaxy Note 10 Lite ayaa hadda laga heli karaa Spain
Kala duwanaanta qoraalka waa midka kaliya ee ku jira suuqa taleefanka ee ku faani kara bixinta stylus, stylus in ...
Samsung Galaxy A11, M31 iyo M11 waxay gaarayaan shahaadada Wi-Fi Alliance
Isbahaysiga Wi-Fi wuxuu caddeeyay saddexda taleefan ee soo socda ee taxanaha Samsung ee Galaxy, Galaxy M11, Galaxy M31 iyo Galaxy A11.
Sawiradii ugu horreeyay ee xaday ee Galaxy Buds +, ayaa si dirqi ah ku muujiya isbeddellada bilicsanaanta
Daadadka ugu horreeya ee jiilka labaad ee Galaxy Buds ma muujinayaan isbeddelada naqshadeynta, isbeddelada aan ka heli doonno gudaha.
5 xeelado gaar ah oo sifiican loogu maareeyo One UI 2.0 ee Galaxy Note10 + iyo Galaxy kale
Galaxy Note 10 + waxaan kuusoo bandhigeynaa fiidiyoow taxane ah khiyaanooyin gaar ah si loo hagaajiyo khibrada One UI 2.0 Android 10.
Galaxy S8 iyo S8 + waxay helayaan cusboonaysiinta amniga Janaayo
Cusboonaysiinta amniga bisha Janaayo ee Galaxy S8 iyo S8 + hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo.